Uber wuxuu ka yimid qunsulka Uber CLI | Laga soo bilaabo Linux
Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo Uber waxay timid PeruSi kastaba ha noqotee, barnaamijkani wuxuu taariikh dheer ku leeyahay dalalka kale ee adduunka, isagoo ka dhigaya madal ugu muhiimsan waaxda gaadiidka gaarka loo leeyahay. Waqti kasta oo aan awoodo waxaan u adeegsan karaa adeegan, marka lagu daro, waxaan u mahadcelinayaa tiro wanaagsan oo saaxiibo ah oo ku soo biiray barxadda martiqaadkeyga, waxaan si joogto ah u haystaa raacid lacag la'aan ah.
Barnaamijka Uber Si fudud ayey u fiican tahay, waqti kasta oo aad ka eegi karto tagaasida gacansaarka ee aad ku leedahay meel u dhow dhexdeeda, marka lagu daro, waad xaqiijin kartaa qiimaha ay kugu kacayso inaad ka guurto hal meel oo aad u guurto meel kale, marka lagu daro tan, waxaad ka bixineysaa qalabka adoo ku ridaya kaarkaaga deynta . Laakiin wax Uber wali aysan haysan, wuxuu ahaa iswaafajinta qunsulka aan jecel nahay, taas oo horay u jirtay, maadaama ay hadda jirto Uber CLI waa aaladda noo ogolaaneysa inaan ka isticmaalno Uber qunsulka.
1 Waa maxay Uber CLI?
2 Sida loo rakibo Uber CLI
3 Isticmaalka iyo muhiimada Uber CLI
3.1 Ka hubi waqtiga imaatinka Uber goobta
3.2 Hubi qiimaha iyo waqtiga la qiyaasay min hal meel ilaa meel kale.
Waa maxay Uber CLI?
Qalabkani hadda wuxuu leeyahay laba shaqeyn.
Xisaabi xaddiga ay Uber ka qaado min meel ilaa meel kale.
Hubi waqtiga ay ku qaadan karto Uber si aad u gaarto goobta aad tilmaamayso.
Natiijooyinka weydiimaha aan ku sameyno arjiga ayaa si farxad leh loogu soo bandhigi doonaa boosteejada, iyadoo la xisaabinayo waqtiga imaatinka 'Uber' ee goobtaada, qiimaha, nooca gaariga, waqtiga imaatinka goobta, iyo kuwo kale.
Qalabku uma baahna xaqiijin nooc kasta ha ahaadee, wuxuu adeegsadaa Google Api si uu u helo iskuduwaha goobta aad tilmaamayso ka dibna Uber Api si loo go'aamiyo sicirka iyo waqtiyada imaatinka gawaarida raacsan.
Sida loo rakibo Uber CLI
Qalabkan si fudud ayaa loo rakibay, isagoo adeegsanaya npm, waxaa jiri doona terminal oo fuliya:
Isticmaalka iyo muhiimada Uber CLI
Marka aan rakibno qalabka waxaan ka faa'iideysan karnaa adoo adeegsanaya mid ka mid ah amarrada soo socda:
Ka hubi waqtiga imaatinka Uber goobta
Hubi qiimaha iyo waqtiga la qiyaasay min hal meel ilaa meel kale.
Qalabkan waxaan iska ilaalineynaa isticmaalka mobiilkeena si aan u ogaano macluumaadka aasaasiga ah sida qiyaasta uberka xiga ee aan qaadan doono ayaa naga qaadi doona, ama waxay naga caawin doontaa inaan go'aansano waa waqtiga ugu haboon ee laga bixi karo pc-ka oo aan u baxno inaan Uber ku qaadno albaabka guriga .
Waxaan ku soo gabagabeyn karaa taas Uber CLI Waa aaladda ugu habboon ee loogu talagalay qof kasta oo doorbida inuu adeegsado boosteejada taleefannada gacanta, iyadoon loo eegin meesha aad juqraafi ahaan ku taal. Waxyaabaha aan ka jeclahay aaladdan ayaa ah inay had iyo jeer xisaabin doonto sicirka ku saleysan lacagta maxalliga ah isla markaana ay xisaabin doonto waqtiga iyadoo ku saleysan masaafada u jirta hal meel ilaa meel kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Uber oo ka socota qunsulka Uber CLI
Laakiin waa maxay sababta ????…. waa maxay dhamaadka end. Waxaa loo maleynayaa in uber adeegsiga uu ku wajahan yahay dhaqdhaqaaq iyo wax qabad, waa sidii inay baabuur iibsadeen, wuu dansan yahay oo wey riixayaan, haa wey shaqeyneysaa, sidoo kale haa ayey sameyneysaa, laakiin ma ahayn sida loogu talo galay in loo isticmaalo…. macno ahaan waxaan u leeyahay tan inta aan ku dhejinayo si aan u tijaabiyo ugana adeegsado ugu yaraan hal jeer terminaalka maxaa yeelay way kari kartaa